November 2008 | TechSectors
ဘာမှန်းမသိတဲ့ အချစ်ဆိုတာက အဲဒီကောင်မလေးကို ဂရုစိုက်တတ်လာအောင် သင်ပေးတယ်။ ကောင်မလေး စိတ်ရှုပ်ရအောင် ဘယ်တော့မှ မလုပ်ရဘူးလို့ ကျွန်တော့်ကိုပြောပြတယ်။ သူစိတ်ညစ်စေမယ့် စကားတွေ ဘယ်တော့မှ မပြောရဘူးလို့ကျွန်တော့်ကို အမြဲ သတိပေးတယ်။ သူလိုအပ်ချိန်တိုင်းမှာ သူ့ကိုအမြဲဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်အောင် မင်းကြိုးစားရမယ်လို့ ကျွန်တော့်ကို အမြဲတွန်းအားပေးတယ်။ သူနာကျင်စေမယ့် အပြုအမူတွေ မင်းအမြဲရှောင် ရမယ်လို့ ကျွန်တော့်ကို သင်ပေးခဲ့တယ်။
Class ကနေပြန်လာတော့ နှင်းတွေကျနေတယ်။ ဟုတ်တယ် မနေ့ကစပြီး နှင်းတွေစကျနေတယ်လေ။ နှင်းစကျတဲ့ညက သတိထားမိတော့ ညဘက် တော်တော်ညဉ့်နက်နေပြီ။ အပြင်မှာ နှင်းတွေဖွေးနေတာပဲ။ လမ်းဘေး ဓာတ်မီးတိုင်တွေရဲ့အောက်မှာ ကတ္တရာလမ်းတွေ အကုန်လုံးနှင်းဖွေးတွေနဲ့ စိုစွတ်နေကြတယ်။ ကားတစ်စီးတစ်စီးဖြတ်သွားလိုက်တိုင်း ခုနတုန်းက ဖွေးဖွေးဖြူနေတဲ့ နှင်းတွေ အကုန်ပျံ့လွင့်ကုန်ကြတယ်။ တချို့လည်း ကားဘီးတွေရဲ့ ဖိကြိတ်တွန်းသိပ််မှုတွေရဲ့အောက်မှာ ဘာစကားမှ မပြောနိုင်ပဲ အရည်ပျော် ပျောက်ဆုံးသွားကြတယ်။ ကျွန်တော်နှင်းတွေကို ချစ်တယ်။ နှင်းတွေပထမဆုံးစကျတဲ့ မနက်က အခန်းရှေ့က ကားပေါ်မှာ မနေ့ညက တစ်ညလုံး အိပ်ပျော်နေခဲ့ကြတဲ့ နှင်းခဲတွေကို ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ ထွေးဆုပ်ကြည့်ပြီး နှင်းကိုတစ်ခါမှ မမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ ငယ့်ကို သတိရမိတယ်။ နှင်းတွေအကြောင်းပြောပြရင် ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို နားထောင်နေရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လို သဘောကျတတ်တဲ့ ငယ် ... သူ့ကို ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာ ရှိစေချင်လိုက်တာ။ နှင်းကို ငယ်လည်းချစ်သလို ကျွန်တော်လည်း ချစ်တယ်။ နှင်းကို မချစ်တဲ့သူဆိုတာရော ရှိရော ရှိလို့လား။ ကျွန်တော်မရှိလောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ နှင်းတွေက ဖြူစင်တယ်လေ။ အေးချမ်းတယ်။ လူဆိုတာက ဖြူစင်မှူကို မြတ်နိုးကြတယ်။ အေးချမ်းမှူကို လိုလားကြတယ်။ အခုဆိုရင် ကျွန်တော့် အခန်းပြူတင်းပေါက်ဘောင်ပေါ်မှာ၊ ကျွန်တော့် အခန်းရှေ့မှာ၊ ကျွန်တော် သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်က ကားလမ်းမပေါ်မှာ၊ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ပေါ်က တိုက်တွေရဲ့ ခေါင်မိုးတွေ ... ရေတလျှောက်တွေပေါ်မှာ၊ သစ်ရွက်တစ်ရွက်မှ မရှိတော့တဲ့ အရိုးပြိုင်းကျ သစ်ပင်တွေရဲ့ ပင်စည် သစ်ခက်တွေပေါ်မှာ၊ အရာအားလုံးက ဖြူစွတ်ဖွေးမြတဲ့ နှင်းတွေရဲ့ အသားတကျနေရာ ယူမှူတွေနဲ့။ နှင်းကျတဲ့ နေ့တွေဆိုရင် ကျွန်တော် class မတက်ချင်ဘူး။ နှင်းတွေအရမ်းကျတော့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတစ်ဆုံးက နေရာတွေထိ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး မှောင်မိုက်ကျလာတတ်တယ်လေ။ ကျွန်တော် အဲဒီအချိန်ဆိုရင် မီးဖိုခန်းနားက ပြူတင်းပေါက်ဘေးနားလေးမှာ ရပ်ပြီး နှင်းတွေတဖြည်းဖြည်းကျလာတာကို ကြည့်ချင်တယ်။ နှင်းတွေ တဖွဲဖွဲကျလာတာကို မြင်နေရရင် ကျွန်တော် ငယ့်ဘေးနားကို ပြန်ချင်တယ်။ နှင်းတွေမှာသာ နားလည်တတ်တဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံရှိမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ကို လွမ်းနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့် မျက်ဝန်းတွေကနေတစ်ဆင့် သူတို့ သိကြမှာပါ။ အချစ်ဆိုတာ အရမ်းကိုထူးဆန်းပါတယ်။
အပြင်မှာ နှင်းတွေကျနေပြန်ပြီ။ ကောင်လေးနှစ်ယောက်နဲ့ ကောင်မလေးနှစ်ယောက် အဆောင်ရှေ့က နှင်းတွေဖွေးနေတဲ့ မြေကွက်လပ်လေးပေါ်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နှင်းခဲတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်ပြီး ဆော့နေကြတယ်။ အချိန်ကတော့ ဒီမှာ ည ၁၁ နာရီ ထိုးနေပြီ။ သူတို့တွေ မအိပ်ကြသေးဘူးလေ။ သူတို့ဘေးနားမှာ မှီခိုရမယ့် ပခုံးတစ်စုံရှိလို့ သူတို့အိပ်ဖို့မစဉ်းစားမိကြသေးတာလား။ ငယ်ရော ... အခုအိပ်နေပြီလား။ ကျွန်တော်ကရော .... ??? မိုးလင်းတော့မယ် ထင်ပါရဲ့။
အမေးအဖြေများနှင့် Ubuntu ဆိုပြီး ကို kyaukphyu က စထားတာ တစ်ခုရှိတယ် - ဒါပေမယ့် မှန်ရာပြောရရင် ကျွန်တော်တို့လည်း သိပ်ပြီး Linux ကို တစ်ဖက်ကမ်းခတ် ကျွမ်းကျင်နေလို့ ဒီလိုလုပ်နေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး - ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်လေးတွေ သိထား တာလေးတွေ ဆွေးနွေးပေးချင် ကူညီချင်လို့ ဒီလိုကဏ္ဍမျိုးတွေ ဖွင့်ထားတာ - တစ်ခုသိထားဖို့က Linux ကို ကောင်းကောင်း သုံးတတ်ချင်ရင် စာများများ ဖတ်ဖို့လိုပါတယ် - ဘယ်လောက်တောင် ဖတ်ရမလဲဆို ခု တီးမိခေါက်မိ ဖြစ်နေပါပြီလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Windows ထက် ၁၀ ဆလောက်ကို ပိုဖတ်ရမယ် - ဖတ်ယုံတစ်ခုတည်းတင် မဟုတ်ဘူး - ကျွန်တော်တို့တွေ မကြောက်မရွ့ံလည်း စမ်းသပ်ရဲရမယ် - တစ်ခုခုနားမလည်တိုင်း ကျွန်တော်တို့တွေကိုချည်း မေးနေလို့ မရဘူး - ခု အမေးအဖြေများနှင့် Ubuntu ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကို သတိထားမိကြည့်တော့ မေးတဲ့သူတော့ ရှိပါရဲ့ - အားတက်သရော ပြန်ဆွေးနွေးမယ့် သူက အရမ်းကို နည်းနေတယ် - အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို ကျွန်တော်တို့က ပညာရှင်တွေ မဟုတ်ဘူး - ပညာရှင်တွေ ဖြစ်သွားရင်တောင် မေးလာ သမျှ ပြန်ဖြေပေးနိုင်ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ဘူး - ဘာကြောင့်လဲဆို ကွန်ပြူတာ တစ်ယောက်တစ်လုံးစီနဲ့ network တစ်ယောက်တစ်ခုစီမှာ ထိုင်နေပြီး - စမ်းချင်သလို စမ်းရင်းနဲ့ ပေါ်လာတဲ့ အမှားကို ဘာမှမမြင်ရတဲ့ နေရာတစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ ပြန်ဖြေပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်နဲ့ မှားဖူးတာချင်း တူနေလို့/ ဖတ်ဖူးတာလေး ဖြစ်နေလို့သာ အဖြေမှန်ထွက်အောင် ပြောကောင်းပြောနိုင်မယ် - မဟုတ်ရင် ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ အင်တာနက်ထဲ လိုက်ရှာဖတ်ပြီး ပြောကြရတာ - ကျွန်တော်တို့ လည်း ဒီလိုကွန်ပြူတာ ဒီလို အင်တာနက်သုံး ဒီလိုစာဖတ်ပြီး suggestion ပေးတာ - ကျန်တဲ့သူတွေလည်း ဘာမပေးနိုင်စရာ ရှိမလဲ - မှားမှာ မကြောက်ကြစမ်းပါနဲ့ - ဝင်ပြောကြစမ်းပါ -
Contributors တွေ ဖိုရမ်မှာ ခေါင်းစဉ်တွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု အသစ်ရေးနေတယ် - ခေါင်းစဉ်သာ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ပြောင်းသွားတယ် တစ်ယောက်မှလည်း ဘာမှ ဝင်မပြောကြဘူး - ကြာတော့ ဘယ်လို ဖြစ်နေလည်း ဆိုတော့ တစ်ယောက်ကောင်း ရေးနေသလို ဖြစ်လာတယ် - ဘာဖြစ်လဲ ပြောပစ်လိုက်စမ်းပါ - ကြီးကြပ်သူ တို့ - အထူးအသင်းဝင်တို့ - ဆယ်ကျော်သက်တို့ - မွေးကင်းစကလေးတို့ - ဆိုတာကြီး ကြည့်မနေစမ်းပါနဲ့ - ကျွန်တော်တော့ ဒီလိုထင်တယ် - ဒါကတော့ မှားနေတယ် ထင်တယ် - ဒီလိုလေးဆို ပိုကောင်းမလား မသိဘူး - ကျွန်တော်တော့ ဒီလို နောက်တစ်မျိုး သိထားတယ် ထပ်ဖြည့်လိုက်ချင်တယ် - စသဖြင့် အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေနဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ Comments တွေ လာကြစမ်းပါ - ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခလုတ်ကြီး စွတ်နှိပ်နေတော့ ရေးတဲ့သူတွေပဲ ကျေးဇူးအရေအတွက် များလာတာပေါ့ - ကျေးဇူးအရေအတွက် များလာတာ ပီတိပဲ ရတယ် - ဘယ်သူ့အတွက် ဘာမှ အကျိုးမရှိဘူး - အမှားတွေ ထောက်ပြကြစမ်းပါ - ပြည့်သထက် ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ကြစမ်းပါ - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Perfect ဖြစ်အောင် ဟာကွက်နည်းအောင် တည်ဆောက်ပြီး ဘယ်သူတွေဟာနေလဲ ဟာတဲ့သူတွေကို တိုက်ခိုက်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ Perfect ဖြစ်လာအောင် ညီအစ်ကို မောင်နှမစိတ်ဓာတ်နဲ့ တည်ဆောက်ပေးကြစမ်းပါ - ပေးသလောက်နဲ့ ဘာလို့ ရောင့်ရဲနေကြတာလဲ - ကျုပ်ဖြင့် နားကိုမလည်ဘူး - မြန်မာတွေက ရောင့်ရဲတယ်ဆိုတာကို တစ်လွဲ အနက်ယူနေကြတယ် - ရောင့်ရဲတယ်ဆိုတာ အားကုန်စိုက်ထုတ်လိုက်ရဲ့သားနဲ့ ရမလာတာတဲ့ အခြေအနေတစ်ခု အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်မတင်ပဲ ရခဲ့သလောက်ကို တင်းတိမ်တာ ( ဒါတောင် နောက်တစ်ကြိမ် ကြိုးစားဦးမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ရှိတယ် ) - အဲတာကို ရောင့်ရဲတယ်လို့ ခေါ်တယ် - ခုကျတော့ ဘာမှကို အားမစိုက်ရသေးဘူး - မဆိုးဘူးပဲ ငါတော်တော်လေး သိလာပြီ - ရပြီ လုံလောက်ပါတယ် ဒီလောက်ဆို ငါ ရောင့်ရဲနိုင်တယ် ဖြစ်နေတယ် - အဲတာ ရောင့်ရဲတာ မဟုတ်ဘူး ပျင်းတာ -
အခု ကျွန်တော် ဒီ Ubuntu FAQs ( Frequently Asked Questions ) ကို စရေးပါမယ် - Ubuntu ကိုစသုံးတဲ့ users တွေ ဘာအခက်အခဲ ရှိမလဲ - ဘာမေးခွန်းတွေ အသိချင်ဆုံး ဖြစ်မလဲ - ဒါတွေကို အဓိကထားပြီး အခြေခံကိုပဲ ရေးမှာပါ - ဒီအကြောင်းက ကို kyaukphyu ဖွင့်ထားတဲ့ အမေးအဖြေများနှင့် Ubuntu ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဘာမှ သိပ်မခြားဘူး - ဒါပေမယ့် -
အမေးအဖြေများနှင့် Ubuntu က ကိုယ်သုံးရင်း ဖြစ်လာတဲ့ အခက်အခဲကို မေးဖို့ နေရာ
ဒီ Ubuntu FAQs ( Frequently Asked Questions ) က ကိုယ့်ဘာသာ မေးခွန်းပြန်ထုတ်ပြီး ဖြေကြမယ့် နေရာ
မေးခွန်းမေးချင်ရင် ကို kyaukphyu ဖွင့်ထားတဲ့ အမေးအဖြေများနှင့် Ubuntu Thread အောက်မှာ မေးပါ -
ကိုယ် Ubuntu စသုံးခဲ့စဉ်တုန်းက ပြဿနာ အသေးအဖွဲလေးတွေ လူတိုင်း ကြုံခဲ့ဖူးကြပါလိမ့်မယ် - အဲဒီ့အခက်အခဲလေးတွေကို ကိုယ့်နောက်မှာ အသုံးပြုမယ့်သူတွေ မခက်ခဲရအောင် ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်စဉ်းစား မေးခွန်းထုတ်ပြီး တိကျတဲ့ အဖြေ - ပြည့်စုံတဲ့ သရုပ်ဖော် ပုံလေးတွေနဲ့ - ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာ လာရောက်ရေးသား မျှဝေပေးကြပါ - ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ရေးပါ့မယ် - ရေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသူများ ဘယ်လိုရေးရမယ် ဆိုတာ Contributors များတွင် ပြည့်စုံရမည့် အချက်များ ဆိုပြီး ကျွန်တော် ဖော်ပြထားတာလေး ရှိပါတယ် - မဖတ်ရသေးသူများ ဖတ်ပြီးမှ ရေးပေးပါ ( အဲ့ဒီ ခေါင်းစဉ်ကို ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာ ဒီအကြောင်းကို ရေးချင်လို့ ကြိုရေးခဲ့တာ ) - မြန်မာလို ရေးသားဖော်ပြရပါမယ် - ဘယ်သူပဲ ဝင်ရေးရေး အကြောင်းအရာ တစ်ခု ( မေးခွန်းတစ်ခု ) ကို ပို့စ်တစ်ခုတည်းမှာပဲ ဆုံးအောင် ဖော်ပြပြီး ရေးသားပေးပါ - ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခု က မေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်နေမှာမို့လို့ သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်တိုင်းကို ကျွန်တော်က မာတိကာ သဘောမျိုး ထိပ်ဆုံးမှာ ရေးသားသူ နာမည်နဲ့ link ပြန်ချိတ်ပေးမှာ မို့လို့ပါ -
ဒီနေရာမှာ ရေးသွားမယ့် အခြေခံ မေးခွန်းလေးတွေဆိုတာ Windows ကနေ Ubuntu ကူးပြောင်းကာစ မှာ ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ ပြဿနာလေးတွေ ဥပမာ - Ubuntu ကိုဘယ်လို clean လုပ်မလဲ ဆိုတာမျိုး - မြန်မာဖောင့် ဘယ်လိုသွင်းလဲ ဆိုတာမျိုး စသဖြင့် - အကြောင်းအရာ သေးသေးလေးတွေကို ဦးစားပေး ရေးပါ့မယ် - တစ်နေ့ နည်းနည်းချင်း မေးခွန်းတစ်ခုစ နှစ်ခုစ ရေးပါ့မယ် - ကျွန်တော် တစ်ယောက်ကောင်း မရေးချင်ပါဘူး - ကူညီကြပါ - အကြောင်းအရာ အကြီးကြီး ဖြစ်ဖို့ မလိုဘူး - အသုံးလိုပြီး ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ် တိတိကျကျနဲ့ စနစ်ကျတဲ့ ဟာကွက်နဲတဲ့ ဖော်ပြမှုမျိုး လိုချင်ပါတယ် -
လူတိုင်းက သူများကို မေးခွန်းမေးဖို့တော့ တတ်ကြတယ် - ကိုယ့်ဘာသာ မေးခွန်းပြန်ထုတ်ပြီး ဖြေဖို့ကြ ပျင်းကြတယ် - ဒီ Ubuntu FAQs ဆိုတဲ့ Thread က ကိုယ့်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် / ကိုယ်သိချင်တဲ့ မေးခွန်းလည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ် / သူများ ဘာသိချင်မလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာတွေးပြီး ထုတ်ထားတဲ့ မေးခွန်းလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် / အဓိကက ကိုယ့်ဘာသာ မေးခွန်းပြန်ထုတ်ပြီး ကိုယ့် ဘာသာပြန်ဖြေပါမယ် - ကိုယ့်မေးခွန်းကို သူများ အားမကိုးပဲကိုယ့်ဘာသာ ပြန်အဖြေရှာတဲ့ သဘောမျိုးပါ - အားလုံး ဝိုင်းဝန်း ကြိုးစားကြရအောင် -
Ubuntu ( Linux ) FAQs ( Self-Study ) မာတိကာ
( ၁ ) Ubuntu မှာ သိထားသင့်တဲ့ ဝေါဟာရတွေက ဘာတွေလဲ ?? - KznT.
( ၂ ) Linux, FLOSS - GPL license တွေဆိုတာ ဘာတွေလဲ ?? - KznT.
( ၃ ) Linux မှာ Distribution တွေကို ဘယ်လို ရွေးချယ်ရမလဲ ?? - KznT.
( ၄ ) ဘာကြောင့် Linux က ကောင်းသလဲ ?? - အပိုင်း ( ၁ ) - KznT.
( ၅ ) ဘာကြောင့် Linux က ကောင်းသလဲ ?? - အပိုင်း ( ၂ ) - KznT.
( ၆ ) ဘာကြောင့် Linux က ကောင်းသလဲ ?? - အပိုင်း ( ၃ ) - KznT.
( ရ ) Ubuntu ဆိုတာ ဘာလဲ ?? - KznT.
( ၈ ) Ubuntu versions တွေရဲ့ ကွာခြားချက်တွေက ဘာတွေလဲ ?? - KznT.
( ၉ ) Ubuntu Nickname တွေနဲ့ Version number တွေဆိုတာ ဘာတွေလဲ ?? - KznT.
( ၁၀ ) Ubuntu ကို ဘယ်နေရာမှာ Download ရယူနိုင်သလဲ ?? - KznT.
( ၁၁ ) Ubuntu ကို ဘယ်လို CD လုပ်ရမှာလဲ ?? - KznT.
( ၁၂ ) Ubuntu ရဲ့ Minimum System Requirements တွေက ဘာတွေလဲ ?? - KznT.
( ၁၃ ) Ubuntu Installation အမျိုးအစား ဘယ်နမျိုး ရှိသလဲ ?? - KznT.
( ၁၄ ) Windows နဲ့ Ubuntu ကို ဘယ်လို Dual-boot တွဲသုံးနိုင်သလဲ - အပိုင်း ( ၁ ) - KznT.
( ၁၅ ) Windows နဲ့ Ubuntu ကို ဘယ်လို Dual-boot တွဲသုံးနိုင်သလဲ - အပိုင်း ( ၂ ) - KznT.
( ၁၆ ) Windows ပေါ်မှာ Ubuntu Linux ကို ဘယ်လို Install လုပ်ပြီး run မလဲ။ - poekaunglay87
( ၁ရ ) Ubuntu 10.04 Lucid Lynx ကို ဘယ်လို Install လုပ်ဆောင်ရသလဲ ?? - KznT.
( ၁၈ ) Windows နဲ့ Ubuntu နှစ်ခုတွဲတင်ရင် Dual-Boot မှာ Windows ကို Default ဖြစ်နေအောင် ဘယ်လိုထားမလဲ ?? - KznT.
( ၁၉ ) Ubuntu မှာ ဖျက်ထားတဲ့ Panel ကို ဘယ်လို ပြန်ခေါ်မလဲ ?? - KznT.
( ၂၀ ) Ubuntu မှာ Virtual Box ကို ဘယ်လို သုံးမလဲ ?? - kyaukphyu
( ၂၁ ) Ubuntu နဲ့ Windows Password ကို ဘယ်လိုဖြုတ်မလဲ ?? - kyaukphyu
( ၂၂ ) Ubuntu တင်ပြီးတဲ့နောက် အသုံးပြုသင့်တဲ့ Apps တွေက ဘာတွေလဲ ?? - KznT.
( ၂၃ ) ဘာလို့ Ubuntu သုံးသင့်လဲ ..?? - kyaukphyu.
( ၂၄ ) Linux မှာ Squid Proxy Server ဘယ်လို သုံးမလဲ ?? - ရာမညဖိုးလပြည့်
( ၂၅ ) Linux Samba Server ဆိုတာ ဘာလဲ ?? - မိုးလွင်
( ၂၆ ) Ubuntu ကို USB Flash Drive ကနေဘယ်လိုသုံးမလဲ ?? - KznT.
( ၂၇) Ubuntu မှာ CCSM ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ ?? - KznT.
( ၂၈) Linux keyboard shortcuts တွေက ဘာတွေလဲ ?? - yeman.
( ၂၉) Ubuntu Video Tutorials တွေ လေ့လာချင်သလား ?? - kyaukphyu.
( ၃၀ ) Ubuntu မှာ Password ကို ဘယ်လို Reset လုပ်မလဲ ?? - kyaukphyu.
( ၃၁ ) Ubuntu မှာ ဘယ်လို Themes လှလှလေးတွေ ရှိသလဲ ?? - KznT.
( ၃၂ ) Backtrack ဆိုတာ ဘာလဲ ?? - မုန်းရခက်.
( ၃၃ ) Linux Wallpapers နဲ့ Icons တွေ ဘယ်မှာ ယူရမလဲ ?? - kyaukphyu.
( ၃၄ ) Linux အသင်းဝင်တစ်ယောက်ဟာ ဘာတွေ သိထားဖို့ လိုမလဲ ?? - KznT.
( ၃၅ ) ပီစီအဟောင်းတစ်လုံးမှာ Linux ဘယ်လိုသုံးမလဲ ?? - poekaunglay87
( ၃၆ ) အသင့်တော်ဆုံး Linux OS ကို ဘယ်လိုရွေးယူမလဲ ?? - KznT.
( ၃ရ ) RED Hat Linux Installation ကို ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ ?? - komyo2010
( ၃၈ ) Ubuntu တင်ပြီး ဘာတွေ ပြင်ဆင်ဖို့ လိုသေးလဲ ?? - KznT.
Rebecca Win သီချင်းတွေ Youtube ကနေ လိုက်ရှာ ပေါင်းပြီး Embed လုပ်ထားလိုက်တယ် - နောက်ပိုင်း တစ်ပုဒ်ချင်း လိုက်ရှာဖို့ မလိုတော့ဘူးပေါ့ -